Saddex arrimood oo muujinaya in Mahdi Guuleed uu ka baxay taageeradii MW Farmaajo | Hadalsame Media
Home Maqaallada Saddex arrimood oo muujinaya in Mahdi Guuleed uu ka baxay taageeradii MW...
Saddex arrimood oo muujinaya in Mahdi Guuleed uu ka baxay taageeradii MW Farmaajo
(Hadalsame) 03 Okt 2021 – Wuxuu mar ahaa siyaasiga ugu weyn ee taageersan, mar kalena wuxuu noqday hoggaamiyaha xisbiga aan dhalan ee Nabad iyo Nolol, laakiin hadda waxaa muuqata inuu isbedel ku yimid.
Arrimaha soo socda waxay caddeyn u yihiin sida Mahdi Guuleed ugu xuub siibtay hoggamiye mowqif u gaara leh oo aan lagu tiri karin inuu la socto Farmaajo iyo kooxdiisa Doorashada.
QORISTA LIISKII SENATOORRADA
Mahdi Guuleed ayaa ka faa’iideystay hoos u dhaca awoodii Maxamed Farmaajo ee timid kaddib khilaafkii ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil ee keenay inuu dagaal siyaasadeed dhex maro isaga iyo iyo Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wuxuuna helay awood iyo xorriyad dheeraad ah.
Previous article”Dadku Daalibaan ayay arkaan balse waxaa jira dal Somalia la yiraahdo oo cashar u dhigay Maraykanka” – Wargays Hindi ah oo qoraal dheer ka qoray dhacdadii 3-dii Okt. 1993-kii
Next articleLabadaa sawir waxaa u dhaxaysa 46 sanadood & siyaasado aad u kala geddisan (Akhri waxa ay ku saabsan yihiin oo faahfaahsan)